> Resource > Transfer > Ladnaansho Photos markii laga soo wareejiyay Camera in Computer
Weligaa inta aad dhibaato this? Waxaad ayaa si taxadir sawiro aad ka camera gudbaayo computer, laakiin bartey sawirada "waayay". Waxaad la yaabay sida ay u dhici kara oo doonayay in ay ka soo kabsado photos waayay xogta kala iibsiga , iyadoo mararka aad si guul leh loo sameeyo, mararka qaar waxaad kaliya ku guuldareystay.
Xaaladan oo kale waxaa lagu talinayaa in ay isku dayaan software kabashada sawirka si aad u hubiso haddii aad sawirka ku waayay in lagu soo kabsaday karo. Dadka isticmaala Windows, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Photo Recovery . Barnaamijka khatar la'aan Tani soo kaban karto sawiro laga badiyay ka kamaradaha digital ama kombiyuutarka la tayada asalka ah. Isla mar ahaantaa, version maxkamadda u sheegi kartaa in aad ku eegaan saamaynta ee thumbnail si aad u aragto haddii ay sawiro aad waxay yihiin iyo in kale. Halkan waan kula talinayaaye waa in labada Skaanka camera iyo computer, hagaajinta heerka guusha ee soo kabsaday badiyay sawirka.
Haddii aad tahay user Mac ah, u isticmaalaan Wondershare Photo Recovery for Mac .
3 tallaabo inuu ka soo kabsado sawiro laga badiyay ay sabab u tahay wareejinta
1. Isku qalabka si aad computer, abuurtaan barnaamijka oo guji "Start" si ay u bilaabaan.
2. Dooro qalabka si scan. Haddii isku day inaad hesho photos dib lumay kombiyuutar, si toos ah ay maamulaan barnaamijka dooro Risaalo meesha aad badiyay sawiro aad u iskaan.
3. Ka dib markii baaritaan, Xiisaha iyo hubi ee photos recoverable marsiiyey baxay.
4. Dooro kuwa aad rabto oo wuxuu oofin soo kabashada.
Video tutorial ee soo kabsaday xogta waayay wareejinta
Sababta sababta aad u soo kaban karto sawiro lumay
Ka dib markii sawirka lumay, xogta waxaa mar walba ma laga badiyay, kaliya ma la arki karo ama la akhrin karo, maxaa yeelay, index galo nidaamka ka dhigaysa calaamad gaar ah oo ku saabsan kuwa xogta si maldahan u goobtan waxaa loo qori karaa by macluumaad kale oo cusub. Sidaas maanka ku hayo: ma gelisay sawiro dheeraad ah ama macluumaad kale ee meel ka mid ah halkaas oo aad sawir laga badiyay waxaa lagu kaydiyaa, tan iyo mar aad saaray files kale oo cusub waxa ku jira, meel bilaash ah la overwritten doonaa dad kale, oo sidaas awgeed ay adag tahay inuu ka soo kabsado lumay sawir.
Qaar ka mid ah xaaladood keeni khasaaro sawir
1. Ka dib isku xira camera in ay computer, aad bilowdo wareejinta sawirka. Dhaco aad taaban silig xogta, taasoo keenaysa USB ah ineysan. Ma aha in dhamaan photos waxaa si guul leh loo wareejiyay iyo qaar ka mid ah ay ka lumaan.
2. kedis ah xoog-off ah camera ama computer keeni kara sawirka laga badiyay aad. Marka ay taasi dhacdo, habka wareejinta la kala gooyey lahaa si khasab ah, iyo qaar ka mid ah sawirada aad la lumay laga yaabaa.
3. Haddii aad computer ma laha meel ku filan in uu kaydiyo sawirada dheeraad ah, xogta wareejinta aan doonaynin in la dhammeeyo ilaa meel qaar ka mid ah la sii daayay. Haddii aad 'Cut'-' paste 'sawir iyo sii u wareejinta, sawirka waxaa lagu lumin lahaa.
4. Fayraska. Haddii aad sawirka waxaa saameyn ku leh virus, marka aad u wareejin ka camera in computer, software anti-virus ah in aad computer virus dila yaabaa in sawirka la tirtiro si toos ah. Fayrasku wuxuu ku tirtirayaa laakiin sawirkaaga waxaa sidoo kale laga badiyay.
5. Waxaa jira xaalado ka badan sida tan.